नाकको शल्यक्रिया गर्दा ओम अस्पतालमा कसरी गयो महिलाको ज्यान ? - TV Annapurna
नाकको शल्यक्रिया गर्दा ओम अस्पतालमा कसरी गयो महिलाको ज्यान ?
काठमाडौँको चाबहिलमा रहेको ओम अस्पतालमा एक बिरामीको मृत्यु भएको छ । बुटवल निवासी ४० वर्षिय कमला भट्टराईको नाकको शल्यक्रिया गर्दा मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ ।
शल्यक्रिया गरी नाकको बाङ्गगो हाड सोझ्याउन उनी गत शुक्रवार अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । उनलाई बुधबार दिउँसो अस्पतालले मृतक घोषणा गरेको थियो ।
उनका आफन्तले भने अस्पतालको लापरवाहीका कारण विरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै अस्पताल परिसरमा नाराजुलुस गरेका छन् । बिरामीको मृत्युबारे छानबिन गर्नुपर्ने, अस्पतालले आफ्नो लापरबाही स्विकारेर माफी माग्नुपर्ने मृतकका आफन्तहरुको माग छ । माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने उनीहरुले बताएका छन् ।
यता अस्पताल प्रशासनले भने कमलाको उपचारमा डाक्टरको लापरवाही अस्विकार गरेका छन् । नाकको शल्यक्रिया सुन्दा सामान्य भएपनि संवेदनशिल अंग भएकाले यसको शल्यक्रियामा इन्फेक्सन बढी हुने अस्पताल प्रशासनको भनाई छ ।
हिन्दू राष्ट्र बन्न नदिने षड्यन्त्र: अध्यक्ष थापा